Mifandray ve ny fahaketrahana sy ny aretim-po? - Fanabeazana Ara-Pahasalamana | Desambra 2021
Orinasa, Vaovao Wellness Fanatanjahan-Tena Mavesatra Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Lalao Orinasa Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Zava-Mahadomelina Vs. Namana Fiaraha-Monina News Ny Fizahana Orinasa, The Checkout Community, Company Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Fialam-Boly
Tena >> Fanabeazana Ara-Pahasalamana >> Mifandray ve ny fahaketrahana sy ny aretim-po?
Mifandray ve ny fahaketrahana sy ny aretim-po?
Azo inoana fa efa henonao fa ny hatavezina, fifohana sigara, ary diabeta dia mampitombo ny mety hisian'ny olana aretim-po. Ditto misy kolesterola avo, antitra ary tantaram-pianakaviana. Ankehitriny dia misy antony hafa mety hampidi-doza ny aretim-po, ary iray amin'izany Amerikanina olon-dehibe 17,3 tapitrisa miaina miaraka: famoizam-po.
Ny famoizam-po, toe-javatra mampiavaka ny alahelo maharitra sy ny fahaverezan'ny fahalianana amin'ireo hetsika mahafinaritra taloha, dia lalina vokany eo amin'ny vatana . Izy io dia mety hiteraka fahaverezan'ny angovo, fiovana amin'ny fahazotoan-komana, fikorontanana amin'ny torimaso, tsy fifantohana be loatra ary - marobe ny fikarohana hita - aretim-po.
Research dia nahita fa ny olon-dehibe manana famoizam-po dia manana voka-dratsy 64% lehibe kokoa noho ny olona tsy ketraka. Ny fandinihana hafa dia mametraka ny risika akaiky kokoa 80% . Inona koa, ireo olona manana famoizam-po sy aretim-po dia manana risika 59% lehibe kokoa noho ny aretim-po na ho faty amin'ny aretim-po noho ireo mpiara-miasa aminy tsy voadona. ny Fikambanana Amerikanina fo (AHA) dia mamporisika ny marary aretim-po ankehitriny mba hojerena noho ny fahaketrahana.
Ny famoizam-po dia mety ho zava-dehibe indrindra amin'ny risika amin'ny aretim-po toy ny zavatra toy ny diabeta, fifohana sigara, fiakaran'ny tosidra ary hatavezina, hoy ny soso-kevitra David Corteville, MD , mpitsabo aretim-panafody klinika ao amin'ny Ivon-toerana Sands-Constellation Heart ao amin'ny Rochester Regional Health.
Ny fiantraikan'ny famoizam-po amin'ny fo
Ahoana ny fiantraikan'ny fahasalamanao ara-tsaina amin'ny fahasalaman'ny fonao? Mihevitra ny mpahay siansa fa mety misy fomba isan-karazany.
Anton'ny fomba fiaina: Tsy mahagaga raha sarotra ny mijanona ho mazoto hihinana tsara sy hanao fanatanjahan-tena rehefa kivy ianao. Ny olona manana famoizam-po dia mety ho be loatra noho ny an'ny vahoaka amin'ny ankapobeny ny mihinan-kanina fa tsy manao fanatanjahan-tena. Ary fantatsika fa ny hatavezina sy ny tsy fahavitrihana dia hery mitarika aretim-po roa.
mamaivay : Ny famoizam-po dia miteraka fivontosana ambany amin'ny vatana. Io fivontosana io dia afaka manenjana ny arteria ary mahatonga azy io azo inoana kokoa fa ny takelaka (fametrahana kolesterola ao amin'ny lalan-drà) dia hiala amin'ny rindrin'ny lalan-drà, amin'izay hanentsina ireo lalan-dra ary hanelingelina ny fikorianan'ny rà mankamin'ny fo.
Fambolena platelet: Ny platelet dia sela madinidinika ao amin'ny ra izay ilaina amin'ny fampidiran-dra. Research mampiseho fa ny olona manana fahaketrahana dia mazàna manana platelets mihetsika bebe kokoa, midika izany fa mety hanjary clots izay manakana ny fikorianan'ny rà mankamin'ny fo izy ireo.
Aritimia fo: Ny famoizam-po dia toa manararaotra ny fivoaran'ny atrial fibrillation, a fitepon'ny fony tsy ara-dalàna . Tsy dia azon'ny mpahay siansa mazava tsara ny antony, saingy miahiahy izy ireo fa ny fitomboan'ny haavon'ny fivontosana izay matetika no hitan'ny olona manana fahaketrahana dia mety ho antony iray.
Mety hiteraka fahakiviana ve ny aretim-po?
Manana aretina mandrahona aina toy ny aretim-po, ilay mpamono olona voalohany tany Amerika , dia tsy maintsy mandray anjara amin'ny fahasalamana ara-tsaina na iza na iza.
Tombanana ho 20% [ny olona voan'ny aretim-po] no ketraka ary hatramin'ny ampahatelony no ketraka a fijanonan'ny fo tampoka , hoy izy Todd Hurst, MD, mpitsabo aretin-tsaina miaraka amin'ny Banner University Medical Center any Phoenix, Arizona. Azo inoana fa noho ny antony marobe, toy ny fitokana-monina eo amin'ny fiaraha-monina, fanaintainana, aretina, aretina ambany, tahotra, tebiteby ary tsy fahatokisana.
Eo koa ny fitomboan'ny risika amin'ny famoifoizana aorian'ny fandidiana ny fo. Telopolo ka hatramin'ny 40% amin'ireo marary ireo no mitebiteby, hoy ny dokotera Corteville. Ambony noho ny besinimaro izany.
Antony iray hafa mety hitranga amin'ny famoifoizana aretim-po? Ny fandinihana sasany dia manondro ny tena zava-mahadomelina ampiasaina hitsaboana aretim-po.
Mpanakana beta [zava-mahadomelina ampiasaina hampihenana ny tosidra sy hifehezana ny adrenalinan'ny hormonina miady amin'ny vatana] toy ny atenolol , metoprolol ,ary carvediloldia mifandray amin'ny fitomboan'ny risika amin'ny famoizam-po amin'ny fanadihadiana sasany, saingy tsy ny rehetra, hoy ny Dr. Hurst. Mila fikarohana bebe kokoa alohan'ny hamaranana ny fehin-kevitra voafaritra.
Ary na dia mety hampitombo ny risika amin'ny famoizam-po aza ny beta blockers dia zava-dehibe ny manamarika fa ny tombotsoany dia mety mihoatra ny loza mety hitranga.
Ny Beta blockers dia naseho mafy hanodinana ny tsy fahombiazan'ny fo, ary isaky ny 10 mmHg ny tsindry systolika dia hampihena ny mety ho aretim-po sy fivontosana eo amin'ny 50%, hoy ny fanazavan Carl Tong, MD, Ph.D. , mpitsabo aretin-tsaina ary profesora mpiara-miasa ao amin'ny Texas A&M University College of Medicine .
Moa ve ny fitsaboana ny fahaketrahana mampihena ny risika amin'ny aretim-po?
Izany dia miorina amin'ny antony, fa raha mifehy ny fahaketrahana ianao dia mampihena ny risika amin'ny aretim-po.
Tao amin'ny fanadihadiana iray, ireo olona tratry ny fahaketrahana izay voatsabo antidepressants na fitsaboana alohan'ny ny fivoaran'ny soritr'aretin'ny aretim-po dia nampidina ny ahiahin'izy ireo hanana 48% ny aretim-po.
Ny mpanohitra serotonin-tsolika voafantina, na SSRI, [kilasin'ny antidepressants] dia naseho fa azo antoka sy mandaitra amin'ireo mararin'ny fo, hoy ny Dr. Corteville. Marary aretim-po maro no mihinana fanafody marobe ary mila mandinika ny fifandraisan'ny zava-mahadomelina isika. Anisan'ireo SSRI, ireo izay tsy dia mifanerasera firy amin'ny zava-mahadomelina escitalopram SY sertraline . Wellbutrin dia naseho koa fa azo antoka ihany koa.
Raha fitsaboana no resahina, ny fitsaboana amin'ny fitondran-tena kognitive (CBT) dia naseho fa mahomby indrindra amin'ny fitsaboana ny fahaketrahana ary tokony horaisina ho toy ny fitsaboana voalohany. Ny CBT dia endrika fitsaboana ara-tsaina izay manampy ny olona hamerina ny eritreritra ratsy na fihetseham-po ho lasa eritreritra tsara kokoa. Ny fampifangaroana ny CBT amin'ny SSRI dia hita fa mandaitra kokoa [amin'ny fitsaboana ny fahaketrahana] noho ny fampiasana ny iray na ny iray hafa, hoy ny fanazavan'i Dr. Corteville. Ny fitsaboana ny famoizam-po dia mampihena ny loza ateraky ny aretim-po toy ny aretim-po, tapaka lalan-dra , ary ny fahafatesana.
Ahenao ny risikao
Ny fampihenana ny loza mety hitranga amin'ny toe-pahasalamana matotra dia matetika tonga amin'ilay antsoin'ny mpitsabo hoe Life's Simple 7:
Mifehy ny tosidra
fitandremana siramamy ao anaty ra amin'ny fanamarinana
Mitazona ny tahan'ny kolesterola mahasalama
Mijanona ao anatin'ny lanjan'ny lanjany mahasalama
Ny fampihetseham-batana aerobika tsy tapaka dia naseho fa mandaitra toy ny fihinanana fanafody antidepresy, hoy ny dokotera Tong. Ny AHA dia manolotra fanatanjahan-tena aerobika 150 minitra isan-kerinandro (mandeha an-tongotra, ohatra) na fanatanjahan-tena mahery fatratra 75 minitra isan-kerinandro. Ho fanampin'izany, ny fampihetseham-batana dia afaka manampy amin'ny tosidra, siramamy ao anaty, ary lanja mahasalama.
Ny fikarohana dia mampiseho fihenan'ny 80% amin'ny aretim-po ary fihenan'ny stroke stroke 50% amin'ireo izay manatsara ny lafin-javatra fito rehetra raha oharina amin'ireo izay tsy, hoy ny Dr. Hurst. Mihatra amintsika rehetra izany, na kivy isika na tsia. Na izany aza, ny fitsaboana ny fahaketrahana dia mety hanamora ny fanovan'ny olona iray ny fomba fiainany.
Raha manana famoizam-po ianao dia alao antoka fa voamarina fa voan'ny aretim-po ianao. Ary raha manana aretim-po ianao, dia alao antoka fa izany no izy naseho noho ny hakiviana . Ny famoizam-po sy ny aretim-po matetika dia miara-miasa ary ny fitsaboana amin'ny fomba mandaitra ny tsirairay amin'ny fanafody fo sy antidepressants mety dia manatsara ny kalitaon'ny fiainanao amin'ny ankapobeny - ara-batana sy ara-tsaina.
Zavatra 9 azonao atao hisorohana ny homamiadana
Enbrel vs Humira: fahasamihafana lehibe sy fitoviana
hatraiza ny herin'ny klonopin raha oharina amin'ny xanax
maharitra hafiriana vao manomboka miasa ny levaquin
paoma cider vinaingitra pampiasana ho an'ny masirasira aretina
inona ny mahasamihafa ny mucinex d sy dm
inona ny soritr'aretin'ny tsy fahazakana ronono
ny voka-dratsin'ny zyrtec d 12 ora